Banijya News | » सकसपूर्ण सभामुख चयनः उपसभामुख नछोडने, अध्यक्षहरु आफ्नो पक्षको बनाउने अडानमा सकसपूर्ण सभामुख चयनः उपसभामुख नछोडने, अध्यक्षहरु आफ्नो पक्षको बनाउने अडानमा – Banijya News
सकसपूर्ण सभामुख चयनः उपसभामुख नछोडने, अध्यक्षहरु आफ्नो पक्षको बनाउने अडानमा
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई उपसभामुख पदबाट राजीनामा गराउने निर्णय गरेको छ । तर उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले राजीनामा नदिने अडान लिएकी छन् । उनको यो निणर्य अनुसार सभामुख चयन नेकपाको लागि सकस पूर्ण भएको छ । नेकपाको सचिवालय बैठकले राजीनामा दिन निर्देशन दिए पनि उनले पुरानै अडान लिएकी हुन् । शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकबाट राजीनामा गराउने निर्णय सार्वजनिक भएसँगै उनले पदबाट नहट्ने जानकारी दिएका हुन् । तुम्बाहाङ्फेले आफूलाई सभामुख बनाउने शर्तमा मात्रै उपसभामुखबाट बाहिरिने अडान लिएपछि पाटी सचिबालयको निणर्य समेत ओझेलमा पर्ने देखिन्छ । उनलाई भित्री रुपमा राष्ट्रपति विद्यादेखि भण्डारीको साथ छ ।
सत्तारुढ नेकपामा सभामुख चयन प्रक्रियालाई लिएर दुई अध्यक्षबीच तीव्र ध्रुवीकरण भएको समय तुम्बाहाड्फेको यो निणर्यले सभामुख छनौट झन सकर पूर्ण भएको हो । त्यसैपनि दुई अध्यक्ष बीच को सभामुख बनाउँने भन्ने बारेमा निस्कर्ष निस्कि सकेको छैन् । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अनावश्यक गुटबन्दी गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष केपी ओली रुष्ट बन्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री निकट उच्च श्रोतले भन्यो, घरी खुमलटार, घरी भैँसेपाटीमा गुटको भेला गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई थाहै नहुने, घर भित्रको समस्या बाहिर फुक्दै हिडेर समस्या कसरी समाधान हुन्छ रु कार्यकारी अधिकार सुम्पिएको डेढ महिनामै अध्यक्ष दाहालले पार्टी्भित्र चरम गुट भित्र्याएको प्रधानमन्त्री ओलीको ठहर छ । दाहाल पक्षले भने समस्या समाधानको पहल स्वरुप छलफल हुनु सामान्य भएको बताएको बताउँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली संसदीय दलका उपनेता सुभास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउने पक्षमा हुनुहुन्छ भने दाहालले देव गुरुङ वा अग्नि सापकोटा मध्ये १ लाई अघि सार्नुभएको छ । दुई अध्यक्षको आ– आफ्नै अडानको प्रभाव पार्टी संञ्चालनमा समेत परेको छ । यो बीचमा उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाम्फेले समेत आफ्नो दावी कायमै राख्नुभएको छ । प्रतिनीधिसभामा उपसभामुखले राजिनामा नदिएसम्म सभामुख चयन प्रक्रिया शुरु नहुने भएपछि सत्तारुढ दललाई थप सकस भएको छ । प्रतिनीधिसभा हिउँदै अधिवेशन भोलि सुरु हुँदैछ । तुम्बाहाङ्फे भोलीको बैंकठ पनि आफै संचालन गर्ने पक्षमा छिन् । स्रोतका अनुसार नेकपा सचिवालयको उक्त निर्णयपछि उपसभामुख डा. तुम्बाहाङ्फेले छलफल अघि बढाएकी छन् । उनी सभामुख बा अन्य कुनै पावरफूल पद नलिई उपसभामुखबाट विदा नहुने अडानमा छिन् । उनले अडान लिएको समय दुबै अध्यक्ष उनलाई मन्त्री बनाउने आश्वाशन दिन थालेका छन् ।